Nagu saabsan | Jiande Welfine Import & Dhoofinta Co., Ltd.
Jiande Welfine Import & Dhoofinta Co., Ltd.
Asalka asalka ah JIANDE SINFINE POWDER METALLURGY FACTORY. Waxay ku taal magaalada HangZhou Jiande dhaqaale ahaan horumarsan, oo la aasaasay 2001, Welfinehas waxay leedahay aqoon isweydaarsi iskiis ah oo loo dhisay oo ah 5000 mitir murabac, awoodda wax soo saarka sanadlaha ah ee 500 tan.
Waxaan ku takhasusay cilmiga macdanta budada oo aan khibrad u leenahay 17 sano oo leh amaanta dadweynaha, tirada iyo daacadnimada goobtan. Waxaa jira kumanaan alaabood oo la soo saaray, oo loo dhoofiyo Japan, Denmarks, Netherlands iyo USA, iwm.
Waxaan leenahay koox cilmi baaris & horumarineed. Dhammaan alaabooyinka cusub waxay leeyihiin taageero farsamo oo xoog leh gadaashooda.
Iyada oo leh mashiinno otomaatig ah oo otomaatig ah, mashiinno farsamo oo otomaatig ah, foornooyinka faaruqinta ah, mashiinnada EDM ee saxda ah, Lathe,dhalaalida foornada naxaasta ah,Qalabka Maching CNC, shiidi iwm.
Waxyaabaha horay loo sii daayay: isdabamarin iskeed u sameysan, qalab jilicsan,qaybaha kale ee qaabdhismeedka farsamada & birta duudduuban birta naxaasta ah, silsiladda birta ah ee birta lagu shubo, birta duudduuban ee birta ah, hagaha hagaha.
Waxaan haynaa qalab baaris oo qumman: Mashiinka baaritaanka guud, mashiinka baaritaanka silsiladaha, qalabka adag, qalabka cufnaanta, qalabka birta, qalabka muuqaalka indhaha, muuqaalka muuqaalka,iwm
ISO9001: 2000 nidaamka maaraynta tayada oo ay cadeeyeen IQNet iyo CQC.
Dhammaan beenta isdabamarinta ee ay bixiso Wel fine waxay muddo dheer waafaqsanayeen heerarka caalamiga ah ee kiimikada iyo guryaha, sida ASTM, JIS, DIN, MPIF, SAE, GB…